साहित्यकार क्षेत्री भन्छन् - साहित्यमा पनि सिमित बजारको मोनोपोली छ (अन्तवार्ता) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more साहित्यकार क्षेत्री भन्छन् - साहित्यमा पनि सिमित बजारको मोनोपोली छ (अन्तवार्ता)
साहित्यकार क्षेत्री भन्छन् – साहित्यमा पनि सिमित बजारको मोनोपोली छ (अन्तवार्ता)
माघ २० गते, २०७५ - १२:०८
काठमाडौं । हाल काठमाडौलाई कर्मथलो बनाएर साहित्य सिर्जनामा लागेका संघर्ष क्षेत्री धुर्कोट, गाउँपालिका नयाँगाउँ १ गुल्मीमा जन्मिएका हुन् । सर्जक क्षेत्री बुबा प्रेमबहादुर क्षेत्री र आमा ज्ञान कुमारी क्षेत्रीको कोखबाट २०४७ साल मङ्सिर २१ गते तेस्रो सन्तानको रुपमा जन्मीएका थिए । साहित्य सिर्जना गर्ने क्रममा सर्जक संघर्ष क्षेत्री अहिले पाठक सामु आफ्नो पहिलो कृति ‘साकुरा’ लिएर साहित्य मैदानमा होमीएका छन । उनै सर्जक क्षेत्रीसँग खबर डबलीकि सहकर्मी फुलु भुजेलले गरिएको कुराकानीलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
यहाँले पहिलो कृति साकुरा लिएर आउनुभएको छ । कस्तो लागिरहेको छ ?
उपन्यास ‘साकुरा’ प्रकाशनले एक किसिमको खुशी मिलेको छ । यहीँ उपन्यासले थुप्रै मनहरुसँग जोडिन पाएको छु । कुनै पनि लेखक, लेखेर मात्रै लेखक नहुने रहेछ, प्रकाशन हुनु पहिलो शर्त हो भन्ने महसुस गरेँ । कृति प्रकाशन, लेखक हुनुको अघोषित मानक हो भन्ने बुझ्दैछु ।
यहाँ त कविता पनि लेख्नुहुन्छ । कविता र उपन्यास लेख्दा के फरक हुने रहेछ ?
सुरुवाती चरणमा मैले थुप्रै कविता लेखेँ । कवितामा लाग्नाले मलाई उपन्यासमा हेलिन मद्दत पुग्यो । पक्कै पनि कवितामा नलागेको भए उपन्यासमा कलम चलाउन निक्कै गाह्रो हुन सक्थ्यो । समयका हिसाबले कुनै-कुनै कविता लेख्न हप्तौं पनि गुजारेको छु । मेरो बुझाइमा कविता पानीको मुहान हो भने उपन्यास त्यहीँ मुहान हुँदै नदिको बाटो गरेर, अनेकौं उतारचढाव झेल्दै बन्ने विशाल समुन्द्र हो ।
नयाँ लेखक अथवा सर्जक भनौं न, कत्तिको गाह्रो रहेछ बजारसम्म आइपुग्न ? अथवा के-के चुनौती र संघर्ष गर्नुपर्यो यहाँलाई ?
पहिलो कुरा त लेख्नै गाह्रो छ, लेखिरहन झन् गाह्रो काम हो । तर निरन्तर लाग्नै पर्छ । सुरुसुरुमा लेख्दैछु भन्दै गर्दा पनि नेगेटिभ मोटिभेट गर्नेहरू पनि भेटिन्छन् । यस्तो प्रायः समकालीनहरुमा देखिन्छ । नयाँ लेखकहरुलाई निखारिन पनि समय त लाग्छ नै । यहाँ अन्य क्षेत्रमा जस्तै साहित्यमा पनि सिमित बजारको मोनोपोली छ । एक किसिमको प्रकाशन गृह बजारको बिकाउ अनुहारलाई करिस्मेटिक तरिकाले बनिबनाउ लेखक तयार गर्छ । अर्कोथरी प्रकाशन गृह लेखकरसाहित्यकार बन्न चाहनेहरुको गोठालो लाग्छ । अझ भनौं न, तिनीहरुलाई दुहुनो गाई बाहेक केहि सम्झिदैन । साहित्य र साहित्य बजारमा मध्यमार्गी बाटो खुल्नु आवश्यक छ । त्यसो गर्ने भनेकै स्रष्टा र लेखकहरुले नै हो । पहिलो कुरा त हल्ला गर्दिने, चिच्याएर खरानीलाई पिठो भनेर बेच्नेहरुको बोलवाला छ । तर सधैं यस्तो रहदैन । अलिअलि हल्ला नगरी पाठकसम्म पुग्न निक्कै गाह्रो देखेँ । यस्तै चुनौतीहरुसँग फेस गर्न पाउँदा मज्जै लागेको छ ।
साकुरा जन्मिन कति समय लाग्यो ? हामी साकुरा किन पढ्ने ?
साकुरा लेख्न त्यस्तै एक वर्ष लाग्यो होला । तर लेख्न भन्दा कथा जन्मिन थुप्रै समय लाग्यो । भनौं न, गर्भमै हुर्कियो निक्कै समयसम्म । साकुरा खासगरी प्रेमकथामा लेखिएको उपन्यास हो । एक लेखकको प्रेम कथा हो, साकुरा । आजसम्म नेपाली साहित्यमा लेखकलाई केन्द्रमा राखेर उपन्यास लेखिएको रहेनछ । लेखकको कथालाई विभिन्न पात्रहरूमार्फत प्रेमलाई फरक तरिकाले बुझाउने कोशिश हो, साकुरा । अन्य प्रकाशित प्रेमोपन्यास भन्दा भिन्नै शैली र शुत्रमा बनेको उपन्यास हो । लभ स्टोरी पढ्न मन पराउने पाठकहरुले त पढ्नु हुन्छ नै । अझ डिफ्रेन्ट लभ स्टोरी पढ्ने पाठकहरुले त छुटाउनु हुन्न नै । प्रेमको अलवा जीवन दर्शन, उत्प्रेरणा दिने खालको उपन्यास भएकोले जुनसुकै उमेर समूहले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ ।
अन्त्यमा, पहिलो कृति प्रकाशित गर्ने क्रममा रहेका नयाँ लेखकहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त नयाँ लेखक सधैं नयाँ हुँदैन । पुरानो हुन पनि लेख्नु र प्रकाशित हुनैपर्छ । नयाँ लेखकहरु जो कृति प्रकाशनको क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरु आफैमा एउटा असल पाठक हुनुपर्छ । साथसाथै सेल्फ मोटिभेटेड हुनु जरुरी छ । जस्तो कि, मेरो कृति बिक्ला कि नबिक्ला ? कसले के भन्छ , भन्दा पनि आफ्नै मनलाई सोधी हेर्नुस् । तपाईंलाई मन परेको किताब सबैलाई मन नपर्ला तर केहिलाई त मन पर्न सक्छ । बजारको जिम्मा बजारलाई नै छोड्नुस्, तपाईंको काम लेख्नु हो र लेखिरहनु हो ।
माघ २० गते, २०७५ - १२:०८ मा प्रकाशित
कविता : छापामार युवतीको किक